မြန်မာပြည်သူများ၏ ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ် နိုင်ငံအဝှမ်း အရှိန်မြှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပွား – PVTV Myanmar
·2weeks ago ·7 Comments
(၇.၁၂.၂၀၂၁)မှ ( ၆.၁.၂၀၂၂ ) ထိ တစ်လတာကာလ အနစ်ချုပ်
မြန်မာပြည်သူလူထုသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရန် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲနေကြသည်။
အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည် မြန်မာပြည်သူများအပေါ် မတရားဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို နေ့စဉ်ကျူးလွန်လုပ်ဆောင်နေရာ၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက အသက်ရှင်သန်မှု ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရ ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကို မလွှဲသာမရှောင် ဆင်နွှဲနေကြရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးကာလ (၇.၁၂.၂၀၂၁)မှ (၆.၁.၂၀၂၂) ထိ စတုတ္ထ ၁လတာအတွင်း
သေဆုံးသူ- ၂၃၇၇ ဦး အထိကျဆုံးခဲ့ပြီး
ထိခိုက်သူ – ၆၀၅ ဦး အထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံရေးအစီအစဉ်ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အထက်ပါအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်သူဘက်သို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်လာကြသည့်စစ်သား CDM နှင့် ရဲ CDM များလည်း နေ့စဉ်များပြားလာနေပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ မြေပြင်တွင် ယခုတွေ့ရသည့်သတင်းအချက်အလက်များထက် ပို၍ဖြစ်ပွားနိင်ပါသည်။ ။
Myanmar People’s Defensive War Intensively Continuing across the Country
One Month Summary (7 Dec 2021 to6Jan 2022)
Myanmar People are fighting their own defensive war against brutal military junta to end military dictatorship, and to establishanew federal democratic nation. As the junta’s security forces are arbitrarily arresting and torturing the people, committing violations against humanity every day, in accordance with the right to defend for survival, the people of Myanmar have to wage the Defensive War inevitably. During the fourth month after declaringastate of emergency by National Unity Government (7 Dec 2021 –6Jan 2022), there number of casualties from terrorist military army are as follows:
2377 Death Cases and 605 Injured Cases
The National Unity Government of Myanmar is taking care for the comrades who will be taking refuge in Public Squares and the number is increasing day by day.
Note: These facts and information could be underestimated in comparison to the real events on the ground.
တော်တော်နီလာပြီ။ ရှမ်း ရခိုင် ဧရာ ပဲခူးပဲကျန်တော့တယ်
Talaydu Hso says:
2022-01-09 at 7:08 PM
အေရးေတာ္ပံု မၾကာမွီ ေအာင္ေတာ့မည္💪💪💪
2022-01-09 at 7:20 PM
2022-01-09 at 7:27 PM
2022-01-09 at 7:33 PM
Aso Yeh Byah says:
2022-01-09 at 7:38 PM